ခင်ဗျား ပိုက်ဆံကိုမချစ်ဘူးလား? - Myanmar Network
Posted by လူလေး on September 19, 2011 at 15:01 in သိပ္ပံ၊ နည်းပညာ နှင့် အိုင်တီ သတင်းများ
ကျွန်တော်ဈေးထဲမှာ ဈေးဝယ်ရင်း ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံလေးတစ်ခုပေါ့….. ဈေးထဲမှာ ဈေးဝယ်သွားရင်းနဲ့ အမဲရုံမှာ အသားမှာနေတုန်း အန်တီကြီးတစ်ယောက်က ခြင်းပလိုင်းတစ်လုံးနဲ့ ပိုက်ဆံလာရှင်းတာ(ကြည့်ရတာ သူအသားကြိုမှာထားပြီး ဈေးသွားဝယ်နေပုံရတယ်… ပြီးမှ အသားယူရင်း ပိုက်ဆံလာရှင်းတဲ့ပုံ ) အသားထုပ်လေး လှမ်းယူပြီးတော့ ဘယ်လောက်ကျလဲ? ကျသင့်ငွေပိုက်ဆံရှင်းတော့ လက်ထဲကနေ ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဆုပ်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံလိပ်လေးလှမ်းပေးတော့ အမဲရုံထဲက ကိုဘာဘူကလှမ်းယူရင်း ပိုက်ဆံလိပ်လေးကြည့်ပြီး ပြောလိုက်တာက ခင်ဗျား ပိုက်ဆံကိုမချစ်ဘူးလား၊ ပိုက်ဆံကိုချစ်မှ ခင်ဗျားကို ပိုက်ဆံက ပြန်ချစ်မှာပေါ့ဗျ… ခုတော့ဗျာ… ပိုက်ဆံကို ဟိုတစ်ရွက်၊ ဒီတစ်ရွက်စုဆုပ်လာပြီး ပေးရတယ်လို့ဗျာ….(ကြားဖြတ်အနေနဲ့ ပြောစရာတစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့ဗျာ… အိမ်ကနေ ဈေးဝယ်ထွက်လာတုန်းကတော့ အစီအရီယူခဲ့တာပဲ။ ၀ယ်ရင်းပြုရင်းနဲ့ ဆုပ်ကိုင်မိသွားတာပါ။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကြတော့လည်း ဖြစ်သလိုကိုင်သုံးတတ်တဲ့အကျင့်လေးတွ ရှိတယ်ဗျ။ အဟီး…ကျွန်တော်အပါအ၀င်ပေါ့ ဗျာ…. မျက်နှာပူပူနဲ့ပဲ ၀န်ခံရတော့တာပဲဗျို့….) အဲဒါနဲ့ အားမရလို့ ကိုဘာဘူက ထပ်ပြောပြန်တယ်၊ ခင်ဗျားတို့ ပိုက်ဆံကို ချစ်ကြစမ်းပါ…..
ကျွန်တော့်အသိစိတ်ထဲမှာ ဒိန်းကနဲအသံကျယ်ကြီး မြည်သွားသလိုပဲ….အော်…..ကိုဘာဘူပြောမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးမိတယ်။ ငါကော ပိုက်ဆံကို ချစ်ရဲ့လား၊ တန်ဖိုးထားရဲ့လားလို့….ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလဲ တော်တော်လေးရှက်မိသွားတယ်။ ဖြစ်ချင်တော့ ကျွန်တော့်လက်ထဲမှာလဲ ပိုက်ဆံက ဆုပ်မိနေလျှက်သားကြီးမို့ပါ။ ပြီးတော့ ဘောင်းဘီထဲမှာလည်း ဟိုတစ်ရွက်၊ဒီတစ်ရွက် စုပြီးသိပ်ထည့်ထားတာက ရှိနေသေးတယ်။ (အဲဒါတာ ကိုဘာဘူတွေ့လို့ကတော့ ဘယ်လိုများပြောလိုက်မလဲမသိဘူး) တစ်ခုကံကောင်းသွားတာက ကျွန်တော် ပိုက်ဆံမရှင်းခင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးဖြစ်အောင် ပြင်ဆင်ခွင့်အချိန်ရသွားခဲ့လို့ပါ။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင် ဘယ်သူမဆို ဟောဒီလောကကြီးမှာ ပိုက်ဆံကိုချစ်တဲ့သူကြီးပါပဲ….အဲ…ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ကျတော့ တန်ဖိုးထားရကောင်းမှန်းကို မသိကြပါဘူး….. ရှိတဲ့လူလည်း ရှိကြပါတယ်…. တစ်ချို့ဆိုရင် ပိုက်ဆံကို တစ်ကယ်ချစ်တဲ့သူတွေများ ပိုက်ဆံနည်းနည်း၊များများ ဖင်နဲ့ခေါင်း စိတ်ရှည်၊လက်ရှည်စီသုံးတဲ့လူတွေကိုလည်း တွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ (နားလည်သလို ရေးလိုက်တာနော်၊ တော်ကြာ ဟင်..ပိုက်ဆံမှာတောင် ဖင်နဲ့ခေါင်းရှိသေးတာလား ကိုရွှေရိုးရဲ့လို့ အတွန့်မတက်ကြပါနဲ့အုံး) ဈေးဝယ်ပြန်လာပြီး လမ်းတစ်လျှောက်မှာ အဲဒီအတွေးကြီးက ကျွန်တော့်ခေါင်းထဲမှာ တော်တော်ကြီးကို နေရာယူထားတာ… အဲဒီအချိန်ကစလို့ ခုဒီစာလေးရေးနေတဲ့ အချိန်ထိပဲဆိုပါတော့…ကျေးဇူးပါ ကိုဘာဘူရေ။ ဘ၀နဲ့ချီပြီး ရလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုကို အစ်ကိုဘာဘူတစ်ယောက် သင်ကြားပေးခဲ့လို့ပါ။
ခင်ဗျားတို့ကော ပိုက်ဆံကို ချစ်ရဲ့လား?၊ မြတ်နိုးရဲ့လား?၊ တန်ဖိုးထားခဲ့ရဲ့လား?ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်မေးကြည့်ကြပြီး ကွန်းမန့်လေးတစ်ခုလောက်တော့ ထားပေးရင်း၊ အကြံပြုပေးခဲ့ကြပါအုံး။
(အရေးအသားညံ့ဖျင်းမှုသည် မိမိ၏ ညံ့ဖျင်းမှုကြောင့်သာ၊ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ စော်ကားစောင်းမြောင်းရေးသားခြင်းမဟုတ်ပါကြောင်း…)
Permalink Reply by minkatayaung on December 27, 2012 at 10:55
i love money so much but it doesn't love me :(
Permalink Reply by Mg Win Min Myat on January 21, 2013 at 15:32
ကျွန်တော်လည်း ကြားဖူးပါတယ်. ဟုတ်တယ်ဗျ.. သူ့ ကို ချစ်မှ ကိုယ့်ကိုခင်မှာ. ကျွန်တော် သဘောတူတယ်ဗျာ.. သတိထားကြည့်ပါ. ပိုက်ဆံကို စီစီရီရီလေးသုံးကြည့်. ခင်ဗျားတို့ စိတ်ချမ်းသာသလိုခံစားရလိမ့်မယ်...
Permalink Reply by Kyaw Thet Oo on February 22, 2013 at 18:02
ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ ကျွန်တော်လည်းအခုမှသတိထားမိတယ်ကျွန်တော်လည်းပိုက်ဆံကိုမချစ်သလိုဖြစ်နေလို့ အခုပြင်တော့မယ်ဗျာ...
Permalink Reply by Aye Thet on February 23, 2013 at 11:52
ပိုက်ဆံမှမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုလည်း သစ်သည်ဖြစ်စေ ဟောင်းသည်ဖြစ်စေ တန်ဖိုးနည်းသည်ဖြစ်စေ တန်ဖိုးကြီးသည်ဖြစ်စေ သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေးသုံးသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်....
Star MemberPermalink Reply by Yamin Aye on July 31, 2013 at 9:30
ကျွန်မကတော့ ပိုက်ဆံကို ခေါက်ပိုက်ဆံအိတ်ထဲထည့်တာထက် စာအုပ်ကြားထဲ ထည့်တာ ပိုများပါတယ်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဟောင်းနွမ်းတဲ့ပိုက်ဆံလည်း စာအုပ်ထဲညှပ်ထားတော့ ပြန့်ပြီး သုံးရတာ ပိုအဆင်ပြေသလို ကိုယ်တိုင်က အစုတ်မလိုချင်တာ သူများကို လိုချင်ပါ့မလားဆိုတဲ့အတွက် တွေးထားပါတယ်။
Permalink Reply by LIN THANDAR AUNG on December 20, 2013 at 15:25
I love money so much.
Now I keep my money neat and tidy.
Permalink Reply by zinthnat on April 22, 2014 at 15:47
ကျွန်တော်လည်းအဲဒီအတိုင်းပါပဲ နောက်ပိုင်း တစ်ဖြည်းဖြည်းသိလာလို့ အဲဒီအကျင့်ကိုပြင်လိုက်တယ် ကြာပြီ
© 2018 Created by Myanmar Network. Powered by
British Council is the United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland). Our privacy and copyright statements. Our commitment to freedom of information.
© Copyright 2015 Myanmar Network